တိုင်းရင်းဆေးဆရာတစ်ယောက်ရဲ့ဝေဒနာခရီးကြမ်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » တိုင်းရင်းဆေးဆရာတစ်ယောက်ရဲ့ဝေဒနာခရီးကြမ်း
Posted by htet way on Jan 24, 2012 in Drama, Essays.. | 29 comments
ကိုနေချားရေ အပြင်မှာ နှင်းတွေဆွတ်ဆွတ်ဖြူ ကျနေလေရဲ့ ဆိုင်ကယ်မီးတစ်ထိုးစာ အလင်းလေးနဲ့ မနက်ခင်း သွားနေရပါတယ်။ကျွန်တော် တို့ အခုသွားနေတာအိမ်မဲမြို့နယ် ညောင်ပင်စုကျေးရွာလေးကိုပါ။
အဲ့ ဒီမှာ အသက်၈၃နှစ် လောက်ရှိတဲ့ ဆင်းရဲသူကြီးအဖွားအိုတစ်ယောက် ပေါင်ရိုးကျိုးလို့ပါ။ကျွန်တော်ကလည်း ဒီနေ့မနက် ၁၀နာရီလောက်ဆို မြောင်းမြကို သွားရမယ်လေ။ဒါကြောင့်ပဲနှင်းမပွဲခင်ကပဲ သွားလိုက်
အဖွားအို က၀ိပဿနာအားထုတ်တာနှစ်၂၀လောက်ရှိပြီလို့ သိရပါတယ်။ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာနေတာပါ အရိုးကျိုးသွားမှသားသမီးတွေအိမ်ကို ပြန်ရောက်ရတာလို့ သိရပါတယ်။ဟိုရောက်တော့ အဖွားအို က
ညည်းတွားနေပါတယ်။ပေါင်ထိပ်ကထိုးတယ်ကိုက်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျွန်တော်က အဘွားအိုကို လှဲလျှက်ကပဲခြေနှစ်ဘက်ကို ညှိကြည့်ပါတယ်။ခြေနှစ်ချောင်းရဲ့ ခြေဖနောင့်လေးတွေကို ညီအောင်လုပ်ကြည့်
ပါတယ်။ခြေတစ်ဖက်က တစ်လက်မလောက်နီးနီးတိုဝင်နေပါတယ်။သေချာပြီပေါင်လည်ပင်းရိုးလေးကျိုးတာပဲ။ရပ်လို့လည်းလုံးဝမရတော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီမှာသတိရမိတာက ကိုနေချားရဲ့ “ခင်ဗျားဓါတ်မှန်တော့
ရိုက်ထားသင့်တယ်ဆိုတာပါပဲ။ အခုကျွန်တော်ရောက်တဲ့နေရာက အိမ်ခြေ၂၀လောက်ရှိတဲ့ ရွာလေးပါ။ဆင်းရဲတာလည်း ကျွန်တော်ထိုင်ဖို့တောင် ဖျာ ကခပ်စုတ်စုတ်ရယ်။
အဖွားက နားလေးပါတယ် ကျွန်တော်ပြောတာကို မကြားပါဘူး ဘေးက သူ့ချွေးမကဘာသာပြန်ပေး ပြောပေးရပါတယ် ကရင်လို ပြောရတာပါ။နောက်တစ်ခုက ကျွန်တော်လန့်တာပါ အသက်အရမ်းကြီးနေတဲ့
ဒီအဖွားကို အရိုးဆက်ဖို့ ခဲယဉ်းပါတယ်။ မကုပဲထားပြန်ရင်လည်း ဒီခောတ်ကာလ စတီးရိုးထည့်ဖို့ အဖွားမတတ်နိုင်ရှာပါဘူး။နောက်တစ်ခုက မတတ်နိုင်ရှာတဲ့ အဖွားကို စေတနာနဲ့ဆေးဖိ်ုးလေးအနည်းငယ်ထုတ်ပေးတဲ့
စေတနာရှင်ကိုလည်း ပေးတာနည်းလို့ ဒီဆရာကမကုတာလို့ ထင်မှာလည်းစိုးတယ်။အဓိက ကတော့ဆေးဆရာတစ်ယောက်ရဲ့ မေတ္တာကဦးဆောင်သွားလို့ ကုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုနဲ့ ကိုနေချားရေ ခင်ဗျားယုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး အဖွားဒေါ်စီ ဟာ ဆေး၆ခါပဲစည်းရသေးတယ် လမ်းပြန်လျှောက်နိုင်ပါပြီ။လူလွတ်ကိုလျှောက်တာပါ။သို့သော် အထိုင်မှာတော့ လူတွဲရသေးတယ် အထမှာလည်းလူတွဲရသေးတယ်။ကုသမူဆက်လုပ်ရအုံးမယ် ကျန်သေးတယ်ကိုနေချားရေ။
နောက်တစ်ခုကတော့ဒီအဖွားကို ကုသပေးတဲ့ မေတ္တာရှင်က ကြိုပို့ ဆိုင်ကယ်နဲ့ လုပ်ပေးပါတယ် ငွေခြောက်သောင်းပေးပါတယ်။ ကျွန်တော်က ခြောက်သောင်းစိုက်ထုတ်ပါတယ်ဆရာ။
ကိုနေချားရေ လူတစ်ယောက်ဟာ လမ်းမလျှောက်နိုင်ရင် စိတ်ဓါတ်အရမ်းကျတတ်ပါတယ်။ခြေကျိုးတဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်မပါတော့ အရမ်းစိတ်ဓါတ်ကျပါတယ်။ ခိုင်လို့ပဲမှတ်လိုက်ပါ
ကောင်မလေးတစ်ယောက်က ကားပေါ်ကအဆင်းခြေချော်ကျပြီး ခြေကျင်းဝတအဆစ်လွဲခဲ့ပါတယ်။ခြေသလုံးရိုးလည်းအက်သွားပါတယ်။ ဖြစ်ဖြစ်ချင်းပဲ ရန်ကုန်မှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ ဈေးသက်သာ
တဲ့ တရုတ်ဆေးပညာရှင်တစ်ယောက်နဲ့ ကုပါတယ်။အရိုးကျိုးတာ တရုတ်ဆေးက ကောင်းကောင်းဆက်နိုင်ပါတယ်။ဒီကလေးမလေးက ၅ခါလောက်ဆေးစည်းပြီး သက်သာရုံပဲ သက်သာတယ်ဆိုပြီးမသွားတော့ပဲ ဆေးခန်း
ပြောင်းပြပါတယ်။ လမ်းကမလျှောက်နိုင် ၊ရုံးပျက်တာများတော့ အလုပ်ပျက်မှာစိုး နဲ့ မစားနိုင်မအိပ်နိုင်ဖြစ်တော့တာပဲ။ သူမှာကလည်း အကိုနဲ့ ကပ်နေရတယ်။ စုထားတာလေးကလည်း ဆေးကုတာကုန်ပြီ လမ်းကလည်း
မလျှောက်နိုင် ။ဘ၀ကို ဘယ်လိုရှေ့ဆက်ရမလဲတွေးပူနေရတဲ့အချိန်ပေါ့ဆရာရေ။ ဒီလိုနဲ့ သူမရဲ့လမ်းထဲမှာကျွန်တော်ကုပေးလို့ ကောင်းသွားတဲ့ ကျိုဖူးတဲ့ လူနာကဆက်စပ်ပေးပြီး ကျွန်တော်နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်။
ဆရာ ရယ် ရက်နှစ်ဆယ်ရှိပြီ ရုံးပျက်ရက်တွေများလွန်းနေတော့ ………။ ကျွန်တော်ကခြေတောက်ကို စစ်ဆေးပြီး ပုံစံချတယ် ပြီးတော့ဆေးစည်းတယ်ဆရာ။နှစ်ကြီမ်စည်းပြီးတော့ ထောက်နိုင်တယ် ။
နောက်ရက်ပိုင်းကျတော့ ဆေးတစ်ကြိမ်စည်းတယ် ကလေးမလေးကထော့နဲ့ထော့နဲ့နဲ့ ရုံးတော့ ပြန်တက်နေပါပြီ။ဒါတော့ဓါတ်မှန်ရှိပါတယ်ဆရာ။
နောက်တစ်ခုက ဒူးအတက်ထွက်တဲ့ သိမ်ဖြူဈေးမှတ်တိုင် နားက ဖို့မြေလမ်းက ဒေါ်ဘေဘီဆိုတဲ့ အသက်၅၄နှစ်ရှိတဲ့ အမကြီးတစ်ယောက်အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်။ဒူးကဒါဏ်ရာရတာကနေ အရိုးကျီးပေါင်းဖြစ်ပြီး
အတက်ကလေးဖြစ်တာပါ။ လမ်းလျှောက်ကြာကြာ လျှောက်ရင် နာတယ်၊အကွေးအဆန့်မရဘူး နာတယ်။ညအိပ်ရင် ခြေတောက်ကိုရွှေ့ရင် နာတယ်၊လမ်းများများလျှောက်ရင် ညဆိုကိုက်လို့ မအိပ်နိုင်ရှာဘူး
ဆောင့်ကြောင့်လည်း ထိုင်လို့မရတော့ ဆေးခန်းပြတယ် ခွဲစိတ်ရမယ့် အခြေအနေလို့ ပြောပါတယ်။ဒီမှာတင် မိတ်ဆွေ တိုင်းရင်းဆေးဆရာတစ်ယောက်က ဆရာထက်ဆိုတဲ့လူနဲ့ ပြပါလို့ပြောတော့လည်း အင်တင်တင်ပေါ့
နောက်ဆုံးကုဖြစ်ပါတယ်။ ဆေး၅ခါ စည်းပြီးတော့ စောစောကဝေဒနာတွေ တော့ပျောက်သွားပါပြီ။ ကြပ်ထုပ်ထိုး ဆေးလိမ်းတော့လုပ်နေရတယ်။ကျွန်တော်သေသေချာချာမေးကြည့်တယ် ခင်ဗျား လုံးဝပျောက်တာလား
အရင်ခံစားမူတွေရှိသေးလားဆိုတော့ ဆရာရယ် လုံးဝမရှိတော့ပါဘူးတဲ့ ။ကဲဒါဆို ကျွန်တော်ဆရာကြီးကမှာထားပါတယ် ဓါတ်မှန်ရိုက်ပေးပါ။ဆရာဝန်ကိုလည်းဓါတ်မှန်ဖတ်ခိုင်းပါလို့ ပြောရတာတာပေါ့ဗျာ။
ဓါတ်မှန်ကတော့ရပြီဆရာရေ့ ညက သိမ်ဖြူလမ်းက အင်တာနက်ဆိုင်မှာ စကင်ဖတ်တာမထင်ဘူး ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီးဖတ်ကြည့်အုံးမယ်။ဒီအကြောင်းပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးရေးချင်ပါသေးတယ်။
နောက်တစ်ခုကတော့ မြောင်းမြက စာရေးဆရာတစ်ယောက်ရဲ့ဇနီး ဆရာမ ကို ဆေးကုပေးရင်းကြုံရတာပါ။ဆရာမကတော့ချော်လဲရင်းလက်ပြင်အက်သွားတာပါ
ဖြစ်တာကတော့ ၆လလောက်ရှိပါပြီ ရန်ကုန်မှာဆေးပြရင်းဆေးစားလုပ်နေတာပါ။နောက် မြောင်းမြရောက်တော့ မိတ်ဆွေတွေဆိုတော့ အိမ်ဝင်ရင်းနဲ့ စကားစပ်မိတာပါ။ အိမ်မဲကိုထွက်မယ့်ကားကလည်း အချိန်ကနီးနေတော့
ဆေးမကုပေးဖြစ်ပါဘူး။ခြေတောက်တွေ အကြောတက်တာကိုတော့ ရေနွေးနဲ့ ဆားရောစပ်ပြီးညကို စိမ်ခိုင်း ပါတယ် ပြီးရင်လိမ်းပါဆိုပြီး အမကြောလိမ်းဆေးပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခေါက်မှကုပေးပါရစေလို့ မေတ္တာရပ်ခံခဲ့
ရပါတယ်။နောက်တစ်ခေါက်ရောက်တော့ ကျွန်တော်ဆေးစည်းပေးတယ်။နောက်တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် ဆေးစည်းပေးတယ်။ဆရာကဖုန်းဆက်ပါတယ် ကျေးဇူးတင်တယ်ကိုထက်ဝေးရေ့ ဆရာမလုံးဝကောင်းသွားပြီတဲ့
နောက်တစ်ခေါက်သွားတဲ့ နေ့ အဲ့ဒီနေ့ကကျွန်တော်ကြေကွဲတဲ့နေ့ပါ။ ဆရာ့အိမ်ကို အဘွားအိုတစ်ဦးတက်လာပါတယ်။ လက်မောင်းဆစ်ဟသွားပါတယ်တဲ့ လက်ကမြှောက်လို့ ပင့်လို့မရတော့ပါ တဲ့
ဆရာကုပေးပါဆရာရယ်လို့ ညိုးညှိုးငယ်ငယ်လေး ပြောရှာပါတယ်။ ကျွန်တော်ကမြောင်းမြသွားဖို့ ရက်က သိပ်မရှိတော့ပါဘူး ။အဖွားအိုကလည်း ကုန်ကျစရိတ်ကိုပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေ။ကျွန်တော်အဖွားအိုကို
မကုပေးနိုင်တဲ့ အကြောင်း နားဝင်အောင် သာယာပျော့ပြောင်းစွာပြောခဲ့မိပါတယ်။ဒီလက်မျိုးကို ဆေးစည်းရင် ၇ခါလာရင်တစ်ခေါက်ကို စရိတ်ကတစ်သောင်းနီးပါးကုန်မယ်။ဆေးသုံးစွဲမူပါထပ်ပေါင်းရရင် ခက်ရချည်ရဲ့။
အဖွားရယ် ဒီမြို့က ဆရာတွေနဲ့ပဲကုလိုက်ပါနော် လို့ မချင့်မရဲလေးပြောတဲ့ အခါ အဖွားအို က သားရယ် အဖွားအသက်က၉၃နှစ်ရှိပါပြီ အားကိုး စရာသားသမီးတွေလည်းမရှိပါဘူးတူမတွေ ဆရာလေးကိုကန်တော့ပါ့မယ်
ကုပေးပါဆရာလေးရယ်..နော်လို့ တောင်းပန်သံလေးနဲ့ ပြောပါတယ်။ဒီမှာပဲကျွန်တော် လက်ကိုစစ်ဆေးတယ် သွေးကြောပြင်တယ် ဆေးလိမ်းတယ် နေသားတကျဖြစ်အောင် ပြုပြင်လိုက်တယ်။ဆေးတော့မစည်းပေးမိခဲ့ပါဘူး
လိမ်းဆေးတစ်ဗူး ပေးခဲ့ပါတယ်။အဖွားအိုက ဆေးဖိုးလေးယူပါဆိုပြီး တုန်တုန်ချိချိနဲ့ ပိုက်ဆံထုတ်ပေးပါတယ်။နေပါစေ အဖွားရယ် မယူပါရစေနဲ့ ဆိုပြီး ကျွန်တော် ပြန်ဖို့လုပ်တော့ ကျွန်တော်လက်ကို ကိုင်ပြီးမေတ္တာတွေပို့ပါ
ကိုနေချားရေ့ နောက်နေ့စာရေးဆရာက ဖုန်းဆက်ပါတယ်။ ကိုထက်ဝေးရေ့ အိမ်နားကအဖွားကြီးက ညကအိပ်လို့ရတယ် ကိုက်တာတွေဘာတွေမရှိတော့ဘူး တော်တော်သက်သာတယ်ဗျာ ခင်ဗျားကိုလည်းမေတ္တာပို့တယ်
ကျွန်တော်ဆရာနဲ့ ဖုန်းစကားပြောပြီးတော့ ရင်ထဲဆို့နှစ်သွားရပါတယ် ကျွန်တော်ကလည်း ဆင်းရဲတော့ အကုန်အနှစ်နာခံ ကူညီချင်ပေမယ့် မဖြစ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ သမားတော်ဆိုတာ ဆင်းရဲချမ်းသာမရွှေးရဘူးမဟုတ်လား
ထိုညက ..အဲ့ဒီညက ကျွန်တော်အဖွားကြီးမျက်နှာကိုပဲမြင်ယောင်မိပြီးရင်ထဲကြေကွဲခဲ့ရပါတယ် ခင်ဗျာ။
အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် တစ်စုံတစ်ခု လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့လို့ ကျေနပ်လိုက်ပါလို့ အရင်ဆုံး ပြောပြချင်ပါတယ်….
ကျွန်တော်တို့ဟာ အရာအားလုံးကို ကူညီစောင်မဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာပါပဲ
ကျွန်တော်တို့မှာ လူ တစ်ယောက်ရဲ့ အတ္တ ရှိနေသေးလို့ပါပဲ
အဲဒါ miracle လို့ ဆိုနိုင်မလား။
ကျွန်မယုံပါတယ်။ ဒါဟာ မေတ္တာ ဆေးစွမ်း ကလဲ ထက်တာပါ။
အနောက်တိုင်း တစ်ချို့ နိုင်ငံ တွေ မှာကတော့ဖြင့် အသက် ကြီး သူ တွေ အတွက် ကျန်းမာရေး မှာ လုံခြုံမှု ရှိပါတယ်။
မြန်မာပြည် ဟာလဲ ဘိုးဘွားရိပ်သာ လိုမျိုး နွမ်းပါးတဲ့ အသက်ကြီးသူတွေ ကိုစောင့်ရှောက်တဲ့ ပရဟိတ အသင်း တွေ များများ ဖွဲ့နိုင်ရင် ကောင်းမှာ။
ဖြစ်လာမယ် လို့လဲ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ကိုထက်ဝေးရေ ဖတ်ရတာ အင်မတန်ကောင်းပါတယ်။ အပိုဒ်လေးတွေခွဲပြီးရေးရင်ပိုကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။
ကျေးဇူးပါဆရာ ဖက်တီးခင်ဗျား။အမခင်လတ်ခင်ဗျား ကျွန်တော်ရဲ့ ပကတိတွေ့ကြုံ
ရတာလေးတွေကို ရေးခဲ့တာကို သေသေချာချာဖတ်ပေးတာကျေးဇူးပါ။
ဆရာသီရိပျံချီခင်ဗျား ကိုယ်ကျိုးလည်းရှာ အများအကျိုးလည်း ပါအောင်ဆောင်ရွက်ရင်း
အတ္တကို ပါးနိုင်သမျှတော့ ကြိုးစားနေပါတယ်။ဒါပေမယ့်……..
အင်း ဖတ်ရတာ လေးဖြူရဲ့ဝေဒနာခရီးကြမ်းတဲ့ ပိုဆိုးနေပါရောလား ဆရာရယ်… ဝေဒနာခရီးကြမ်း ဘယ်ကိုသွားပြီး ဘယ်ရောက်မလဲ…
တစ်နေ့တော့ တည်ငြိ်မ်သွားမှာပါ ညီမလေးမနော
၀ါသနာကို စွန့်နိုင်တဲ့ တစ်နေ့
ဒါမှမဟုတ် အကို ချမ်းသာသွားတဲ့တစ်နေ့
ဘယ်ရောက်မလဲဆိုတော့ အေးချမ်းတည်ငြိမ်သော အငြိမ်းဓါတ်များစုဝေးရာ ဘေးမဲ့
ကိုထက်ဝေး မြန်မြန်နဲ့များများချမ်းသာပြီးဆင်းရဲသူများကို အခမဲ့ကုသနိုင်ပါစေ။
ဆေးကုချင်ရင် ကိုထက်ဝေးကို ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲသိချင်ပါတယ်…
ကျွန်တော်က စနေတနင်္ဂနွေဆို ရန်ကုန်လာပါတယ် ။
ဖုန်းနံပတ်က 09-73234101ပါ။ ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ် နေရပ်ကတော့
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အိမ်မဲမြို့ အထက်ပိုင်း၁၃လမ်းပါခင်ဗျား။အီးမေးကတော့
ကိုထက်ဝေးရဲ့ .. အတွေ့ကြုံကို ဝေမျှတာ … အားရစရာကောင်းလှပါတယ် … ။
ကုသလို့ပျောက်ကင်းခဲ့သူတွေရဲ့ ပီတိကိုလည်း ထပ်တူခံစားမိပါတယ် … ။ ဒါနဲ့ ကိုထက်ဝေးရေ … အရိုးကျိုးလား .. အက်လား .. လက်နဲ့စမ်းတဲ့ နည်းလေးတွေ … အကြောပြင်တဲ့ နည်းလေးတွေအကြောင်းလည်း .. အလျဉ်းသင့်လျှင်ရေးပါဦးနော် … ။
ပါရမီ၊ ၀ါသနာ၊ လေ့ကျင့်ကျွမ်းကျင်မှုတွေနဲ့ .. ကုသနေတဲ့ အတွေ့ကြုံလေးတွေဖတ်ရခဲတယ် …
စေတနာတကယ်မှန်ရင် မဆင်းရဲပါဘူး…တနေ့တော့ အောင်မြင်တဲ့တိုင်းရင်းဆေးဆရာတစ်ယောက်အနေနဲ့ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ဆက်လက်ရပ်တည်သွားနိုင်ပါစေ.. ဆရာထက်ဝေးစာကိုဖတ်ပြီး ဆရာက သနားကြင်နာတတ်ပုံရပါတယ်.. တဖက်သားပေါ်မေတာ၊စေတနာအပြည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် ချောမွေ့တဲ့ခရီးဖြစ်သွားမှာပါ
စမ်းတာက အတွေ့အကြုံနဲပ ဆိုင်ပါတယ်ဆရာမ
များများကြုံတွေ့ရတတော့ လည်း ဖြစ်သွားတာပါ
အဖေက တိုင်းရင်းဆေးသမားတော်ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့က ငယ်စဉ်ကလေး
ဘ၀ထဲက မြင်တွေ့နေကျပါ။တခါတလေလူနာတွေကြတော့ ဓါတ်မှန်ရိုက်တာလည်းရှိပါတယ်။
လက်ဖျံရိုးလို ကြတော့ ပုံပျက်ပြီး ဖုနေတာပါ ။ဒါဏ်ရာနေရာဖိထောက်လိုက်ရင်
အရိုးကျိုးတာကိုလက်နဲ့ ကိုင်ကြည့်လို့သိပါတယ် ။ကိုက်တာတို့ ရောင်ရမ်းတာတို့လည်းဖြစ်လာ
ဒါကတော့ လူနာက ဆရာပါပဲ သူဘယ်နားမှာနာနေတာကို ကိုယ်ဖိထောက်စမ်းသပ်တာနဲ့
တိုက်ဆိုင်ရတာပါပဲ။အကြောပြင်တာကတော့ နိပ်တာပါ နေရာကွက်တွေရှိပါတယ်
ရေးပါ့မယ်။အခေါ်အဝေါ်တွေကအစ စိတ်ညစ်စရာကောင်းမှာမို့ပါ သလုံးမောင်းတင်ကြော၊
ဖရုံဆွဲကြော၊သည်းခြေကြော။လက်မောင်းသွေးအိမ်ကြော ..စတာတွေကို နိပ်ရတာပါ
ကျနော် အမေက ဒူးမကောင်းဘူး.. ထော့နဲထော့နဲ့ ဖြစ်နေတာကြာပြီ..
ဆရာဝန်ကြီးတွေက ကျီးပေါင်းတက်တာပြောတယ်… ဒူးခေါင်းထဲ
ဆေးထိုးရတယ်… ရေရှည်တော့ မသက်သာဘူးပေါ့ဗျာ…
အဲ့ဒါ ဘာလုပ်ရမလဲ ကိုရင်ကြီးရေ..
ဆရာထက်ရေ ၊ဓါက်မှန်မတင်ဖြစ်ရင် ဓါက်ပုံလေးတော့ တွဲတင်ပေးပါလား။ ဆရာထက်ပေးတဲ့ ပိန်ဆေးနည်းလေးက ကျွန်တော်စမ်းကြည့်တာ မဆိုးဘူး။
အဲ .. ပိန်ဆေးနည်းဆိုပါလား .. ကျွန်မလည်း စိတ်ဝင်စားတယ် … ဟီး .. .။
ကိုထက်ဝေးဆီဖုန်းဆက်ပြီးအင်ကွာရီလုပ်ကြည့်တော့မယ် … ။
မိတ်ဆွေရင်းချာမို့တိုးတိုးတိတ်တိတ် ပြောရရင် ဒူးထဲဆေးထိုးထည့်တာ
ချက်ချင်းကောင်းပါတယ်။သို့သော် side effectဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကတော့များသဗျ။
မောင်ဝိုင်းရေးတဲ့ အားကိုးစရာတိုင်းရင်းဆေးပညာ(၁)မှာ ဒူးထဲဆေးထိုးထည့်တဲ့
အကြောင်းပါတယ်လေဗျာ။ အကောင်းဆုံးကတော့ ဆေးစည်းတဲ့ တိုင်းရင်းဆေးပဲဗျာ။
ဆရာနေးချားခင်ဗျား ပိန်ဆေးနောက်တစ်မျိုးရှိပါသေးတယ် လောလောဆယ် ဗိုက်ချပ်နည်း
ကတော့သံပုရာရည်ကို ကျွန်တော်လိမ်းဆေးနဲ့ ဖျော်ပြီးဗိုက်ကိုလိမ်းပါ စိမ့်ဝင်အောင်ကြာ
ကြာလေးပွတ်ပေးပါ။၇ရက်လောက်ဆိုရင် ချပ်ပါတယ်။ကျောပါလိမ်းရတယ်ဆရာရေ့နောက် အဆင်ပြေရင် ဓါတ်ပုံတင်ပါ့မယ်။
ဟီးဟီး ….. စိတ်မြန်လက်မြန်နဲ့ .. ကော့မန့်ရေးပြီးတာ အားမရလို့ … ချက်ချင်း ဖုန်းဆက်ပြီး .. ဆရာထက်ဝေးကို … ပိန်နည်းလေးအကြောင်း လက်တို့မေးလိုက်ပါတယ် … ။
15ရက်ဆိုတာ အများဆုံးတဲ့ .. ဟီးဟီး …
စလင်းဘော်ဒီဖြစ်ဖို့ … 15ရက်သာ လိုတော့သည်
ဆေးနည်းပေးတဲ့ ကိုထက်ဝေးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် .. ။
ဗိုက်ချပ်နည်းတဲ့ စိတ်ဝင်စားလိုက်တာ ကိုထ့်ဝေးရေ …
နွယ်ပင်တို့က အလုပ်မှာ တစ်နေကုန်ထိုင်ပြီး အလုပ်လုပ်ရတယ်ဆိုတော့
ီုဗိုက်ကပူပူလာတယ်ဆိုတော့ နောက်တစ်ခါတွေ့ရင် ဆေးနည်းတောင်းရမယ်
ဦးထက်ဝေးကြီး..လူနဲနဲလေးကိုဘဲတိတ်တိတ်လေး နည်းပညာတွေမပေးနဲ့နော်.။များတို့ကိုလည်းဝေမျှပါဦး။ ပိန်အောင်လုပ်တဲ့နည်းတို့..ဗိုက်ချပ်အောင်လုပ်တဲ့နည်းတို့လေ….။
ဆရာထက်ဝေး ပိန်ဆေးနည်းကို ကျွန်မလဲ ရုံးက ၀တုတ်မလေးတွေကို နည်းပေးလိုက်တယ် … သူတို့လုပ်ကြည့်တာ နေလို့ကောင်းတယ်ပြောတယ် … ရင်ထဲရှင်းပြီး ချောင်တယ်တဲ့ .. ဒါပေမယ့် သိသိသာသာတော့ ပိန်မသွားကျဘူး …
ရင်းနှီးစွာပြောလိုတာက ပိန်ဆေး (အဆီကျအသားကျစ်ဆေးက)
စားရုံနဲ့ မရနိုင်ပါဘူး ကိုယ်တိုင်စနစ်တကျ လေ့ကျင်ရပါတယ်
သို့သော် ဆက်မ၀အောင်တော့ ထိန်းပေးပါတယ်။တစ်ချို့လည်းအဆီကျအသားကျစ်ပြီး
ပိန်သွားသူတွေရှိပါတယ်။တကယ့် တိုင်းရင်းဆေး ဆေးအမှတ်တွေစားရင်ရပါကြောင်း
စိတ်သွားတိုင်းကိုယ်ပါပြီး မတတ်နိုင်တဲ့ ဝေဒနာရှင်တွေကို စိတ်တိုင်းကျ ကုသပေးနိုင်အောင်-
သစ်တပင်ကောင်း ငှက်တသောင်း ခို …တဲ့
ဦးဦးလည်း အမြန်ဆုံး ကြိတ်ကြိတ်တက် ချမ်းသာပါစေဗျား။
ဆရာ ……………………. (အာဗြဲကြီးဖြင့်အော်ခေါ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်)
ဆြာ ကျနော့်လက်က မကုပဲဒီတိုင်းထားရင် အခြေအနေဆိုးလာနိုင်လား
ဆြာပြောသလို ဆေးစည်းရင်ရော … လုံးလုံးလျားလျားပျောက်သွားနိုင်ပါ့မလား။
ကျနော်တရုတ်ဆေးဆရာဆီမှာ ဆေးစည်းဖူးတယ် စည်းထားတာကိုခဏခဏအရက်ဖြူလောင်းရတယ်
အဲ့ဒါဝေဒနာက မသက်သာဘဲ လက်မှာတော့ အရေပြားတွေလောင်ပီး တော်တော်ကြည့်ရဆိုးသွားတယ်
အဲ့ဒါကြောင့် ဆေးစည်းရမယ်ဆိုတာကို ကြားတာနဲ့ကြောက်နေလို့ပါဗျာ…………
ဆြာပေးထားတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကိုမဆက်မိတာ ခွင့်လွှတ်ပါ။
ခွင့်မလွှတ်ဘူး အရေးယူမယ် ဒါပဲ
ဘယ်နယ် လူကိုများတရုတ်ဆေးဆရာ မှတ်နေတယ် ကုလားကြီးကွချစ်သူက တရုတ်မလေး
သို့သော် အဖုက ကြီးလာနိုင်ပါတယ် နောက် လက်သိမ်နိုင်ပါတယ်
ဥပမာ လက်သီးဆုပ်မကောင်းတာတို့ ချစ်သူကိုလိမ်ဆွဲရင် အားမပါတာတို့ နောက်
လက်ကျဉ်တာတို့ ကိုက်တာတို့ ဖြစ်တတ်ပါသေးတယ်။
ဆရာထက်ဆေးက လုံးဝလောင်တာ အနာဖြစ်တာမရှိပါဘူး။
ရက်တိုတိုနဲ့ ပျောက်ပါတယ်။ကလေးမလေးတစ်ယောက်ခြေကျိုးသွားတယ် အလုံ ဆင်မင်းလမ်း
မှာနေပါတယ် ။တရုတ်ဆေးစည်းတယ် နောက်ထပ်ဆေးခန်းပြတယ်။ အကို ကဆေး၃ခါပဲစည်းခဲ့ပါတယ်